जाडोमा तातो वा चिसो पानी नुहाउने: कुनचाहिँ राम्रो छ? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
जाडोमा तातो वा चिसो पानी नुहाउने: कुनचाहिँ राम्रो छ?
घर स्वास्थ्य कल्याण कल्याण oi- स्टाफ द्वारा सुपर | अद्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, जनवरी २,, २०१ 2015, :12: १२ [IST]
काममा लामो दिन पछि तातो नुहाउने काम गर्नु सबैभन्दा रमाइलो चीज हुन सक्छ। यसले रगत प्रवाहलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ। यसले दुख्ने मांसपेशिलोहरूलाई शान्त पार्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। चिसो पानी नुहाउने गर्मा पानीको जस्तो उस्तै आरामदायक प्रभाव हुँदैन। तर, चिसो पानीमा नुहाउनका अन्य धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्।
चिसो पानी नुहाउने वा आइस स्नान लिनुलाई क्राइथेरपीको रूपमा चिनिन्छ। यो शौकिया र पेशेवर एथलीटहरूको बीचमा सामान्य अभ्यास हो। तर जब तपाईलाई आराम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, तपाई मात्र चाहानुहुन्छ कि तातो पानीको नुहाउनु। तपाईंलाई जाडोको समयमा तातो वा चिसो पानीको नुहाउने फाइदा र विपक्षहरू थाहा हुनुपर्दछ। जाडोको समयमा चिसो पानीको नुहाइ किन राम्रो छ हेर्नुहोस्।
कति दिनमा सूर्य नमस्कार वजन घटाउँछ
चुप लाग्ने विकल्प छैन, विशेष गरी जाडोमा जब तपाई काममा जानु पर्छ र दौडमा जानु पर्छ। त्यसोभए, कुन स्नानको लागि कुन पानी उत्तम छनौट गर्ने सन्दर्भमा, तपाईं जहिले पनि चिसो पानीको लागि जान सक्नुहुन्छ। न्यानो राख्नको लागि तपाईंले धेरै लामो सास फेर्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई धेरै अक्सिजन लिन मद्दत गर्दछ, जुन तपाईंलाई दिनभर सचेत रहन राम्रो हुन्छ।
जाडोमा तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि तपाईको छाला र कपाल सबै सूख्नेछन्। जब तपाईं तातो पानी नुहाउने निर्णय गर्नुहुन्छ, यसले प्रक्रियालाई मात्र गति दिनेछ। त्यसोभए, जाडोको समयमा तातो वा चिसो पानीको नुहाउने छनौट गर्ने बारेमा सोच्दा तपाईले यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। चिसो पानी नुहाउन प्वालहरू सील गर्न र कोटिकलस कडा बनाउन मद्दत गर्दछ।
प्रतिरक्षा र परिसंचरण
कसरी आफ्नो प्रेमी संग cuddle
जाडो को समयमा तपाइँको प्रतिरोधक क्षमता चरम मा हुनु पर्छ। यदि यो होईन भने, त्यसो हो भने तपाईले फ्लू समात्नु भएको छ, जुन यो मौसममा सामान्य छ। चिसो पानीले अंगको रगतमा रगत सर्न मद्दत गर्दछ। यसले प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
अरमान जैन करेन कपूरसँग सम्बन्ध
यो जाडो मौसम को अर्को सामान्य साइड इफेक्ट हो। चिसो मौसम ले मांसपेशिहरु लाई दुखी बनाउँदछ। यदि तपाईंले केहि व्यायाम गर्नुभएको छ भने, तपाईंलाई पक्कै दुख्ने मांसपेशीहरू छन् भन्ने कुरामा निश्चित हुनुहुन्छ। चिसो पानी नुहाउने यसको लागि सबै भन्दा राम्रो समाधान हुनेछ।
तनाव कम गर्दछ
अध्ययनले देखायो कि चिसो शावरमा हाम फाल्ने वा पोखरीमा छिटो जम्प लिनुले युरिक एसिड घटाउन मद्दत गर्दछ। यसले antioxidants लाई अधिकतम स्तरमा राख्न मद्दत गर्दछ।
केराका फाइदा के हुन्
तत्काल कालो सर्कल कसरी कम गर्ने
जीन्स र शर्टमा कतरिना क्याफ
मह र कागतीको साथ हरियो चियाका फाइदाहरू
संकेतहरु उनी तपाईंलाई साथी भन्दा बढी मन पर्छ